Hampianatra antsika hanamora ny dia amin'ny raharaham-barotra ve ny COVID?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Hampianatra antsika hanamora ny dia amin'ny raharaham-barotra ve ny COVID?
Mety ho toa tsy mamokatra firy amin'ny tontolo toa misy ny zava-drehetra, manomboka amin'ny iray andro ka hatramin'ny manaraka, tsy fantatrao izay hitranga. Ary ny fanamby tsy tapaka amin'ny fitantanana ny dia amin'ny areti-mifindra dia tsy azo atahorana, fa amin'ny farany rehefa misy ny fotoana ahafahana manova ny fomba fanaovan-javatra satria nisy zava-dehibe nitranga tamin'ny indostria, dia fotoana tsara ho an'io indostria io handinihana sy jereo izay azo atao amin'ny fomba hafa mandroso. Ary ny iray amin'ireo zavatra tena tian'ny olona rehetra dia ny, azontsika atao ve ny mampiasa an'io fotoana io hanao zavatra tsara kokoa noho isika?
Ny talen'ny Kurt Knackstedt ary mpiara-manorina ny troovo monina any Sydney, Aostralia, dia nampiantrano ny CAPA Corporate Travel Community Masterclass miaraka amin'ireo mpikaroka avy ao Hong Kong sy UK.
Misy fomba iray hamakivakiana an'ity zavatra adaladala rehetra mitranga eo amin'ny sehatry ny asa ity amin'izao andro izao, mba hanandramana hanatsorana ny dia amin'ny orinasa sy hanamorana ny programa fizahan-tany ataon'ny orinasa?
Ny areti-mandringana dia nanome antsika fotoana hahafahana mieritreritra izay mety ho mora sy tsotra kokoa amin'ny ho avy.
Nisokatra ny hetsika niaraka tamin'i Kurt Knackstdet niarahaba ny rehetra ary nampahafantatra ireo mpiara-miasa hafa. Avy any Hong Kong dia i Florence Robert avy any Ericsson, izay nisolo tena ny hevitry ny mpividy androany ny resaka. Tao amin'ny ekipa avy any Hong Kong ihany koa i Dionne Yuen avy any Egencia, ary avy any UK, Paul Dear avy amin'ny SAP Concur.
Ny resaka natolotr'i CAPA - Ivotoerana fiaramanidina dia ny momba ny fitantanana ny programa fitsangatsanganana, saingy, indrindra, ny fiezahana hamantatra raha misy fomba iray amin'ireo zavatra adala rehetra mitranga eo amin'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao, misy ve ny fotoana ahafahana manandrana manatsara ny dia ataon'ny orinasa sy manamora ny orinasa programa momba ny dia.
Vakio hatrany - na mipetraha ary mihaino - ilay resaka velona.